Uxolo Ngaphandle kweBush & Ocean View - I-Airbnb
Uxolo Ngaphandle kweBush & Ocean View
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uRoger iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Isitudiyo esisandul 'ukulungiswa, esetyenziswa nguwe wedwa, esitofotofo, nesitayile saselwandle, esinegumbi eliyi-2 elinendawo yokubuka ulwandle. Iqulethe zonke izinto ezisisiseko ekhitshini (ifriji/i-deep freezer, i-microwave, i-mini-oven nesitovu esiphezulu), indawo yokuhlamba impahla (umatshini omncinci wokuhlamba nowokomisa impahla) kunye nezinto ezinokusetyenziswa kwigumbi lokuhlambela. Indawo yakho yokungena kunye nendawo yokupaka, engaphantsi kwe-100M ukuya elunxwemeni.
Ithe nca ehlathini, ingoma yeentaka - iTai, iParakeet, iMorepork, kunye nolwandle, ngaphantsi komva weMt Manaia edumileyo, sifuna ukwabelana nawe ngeparadesi yethu. Amanyathelo nje ambalwa kwaye ungaqalisa i-kayak okanye ugqithe kwi-Paddleboard yethu ekhuselekileyo uze ubuke unxweme oluya kwiSiqithi saseMotukiore kunye naseManganese Point ekutyibilikeni okuphezulu. Kulula ukusebenzisa igalufa kwiPines Golf Club ecaleni kwendlela. Phola phandle ngoxa inyama eyojiweyo isenza isidlo sangokuhlwa okanye uhambe umzuzu omnye uhamba ngemoto uze utye kwiParua Bay Tavern ethandwayo. Ukuba uthanda unxweme oluhle lwaseNorthland, ulwandle olukhethekileyo, amalwandle ezibuko kunye nokunyuka intaba okumangalisayo, sinayo yonke into - ukusuka kwimizuzu eyi-15 xa uhamba ngemoto usiya eWangarei Heads okanye eMzantsi Pataua. Sisemizuzwini eyi-15 kuphela xa sihamba ngemoto ukusuka kwiziko leWangarei Town kwaye sikwimeko entle yokubuka zonke izinto ezifumaneka eWangarei.
Indawo yayo ezolileyo neyabucala; i-50m ukuya elunxwemeni, i-200m ukuya kwibala legalufu lePines, iikhilomitha eziyi-2 ukuya kwiParua BayTavern edumileyo, +/- i-10km ukuya kwi-Ocean Beach kunye neWangarei Heads.
Unxweme lwethu oluncinci lusezantsi nje kwendawo yokungena. Ukuqubha kunokwenzeka xa kuqhutywa ngamatye amakhulu. Ukongezelela, kukho indawo entle yabucala yokuqubha kunye neqonga elisemanzini ngaphaya nje kwetheku elinemizuzu eyi-20 ngeenyawo okanye imizuzu eyi-15 nge-kayak okanye nge-SUP.
Sihlala kufutshane ibe siyafumaneka ukuba kukho into oyifunayo:-)